Cadaadiska of Masiixiyiinta ee Nigeria | Apg29
Sababta in dadka Masiixiyiinta ah loo silciyo, in Nigeria ayaa dulmi Islaamiyiinta.
Gaar ahaan laba iyo tobankii dalalka waqooyiga Nigeria halkaas oo shareecada ahaaday sharciga reebay dadka Masiixiyiinta ah ee ay xukumada ka nool ay Iimaan.
The dil of kow iyo Nasaara
Recently, aan qoray oo ku saabsan dilka kow iyo Nasaara qaaday maalinta Christmas 2019 Mid ka mid ah iyaga ka mid ah ayaa la toogtay iyo halvshöggs kale toban . article waxa uu leeyahay marka la qoraayo lahaa in ka badan 5,600SoSh kooxihii on Facebook. dil ayaa lagu fuliyay by Boko Haram, kuwaas oo ka yar yahay gobolka Islamic in Nigeria.
Waxaa jira 195,9 milyan oo qof oo ku nool Nigeria kuwaas oo tirada dadka Masiixiyiinta ah waa 91.100.000. Diinta Nigeria waa Islaamka iyo Kiristaanka. Nidaamka Dastuuriga ah waa Jamhuuriyad federaal ah.
dulmi Islaamiga ah
Tani waa caddayn gaar ahaan qayb waqooyiga Nigeria, halkaas oo Islaamku waa Diinta xukuma, halka Masiixiyaddu waa dega koonfurta. xafiiltanka u dhexeeya kooxaha qowmiyadeed ee woqooyi iyo xagga koonfureed u sahlay in caddibaadda Kiristanka.
Cadaadiska ee Nigeria
Masiixiyiinta badankood ee qaybta koonfureed ee dalka, la ixtiraamo ay xoriyadda diinta, laakiin dadka Masiixiyiinta ah ee ku yaalla waqooyiga iyo suumanka waxaa lagu sakhiray in ay rabshadaha by kooxaha Islaamiyiinta.
rabshadaha Tani inta badan keenta in khasaaraha ka mid ah nolosha iyo hantida labadaba, sidoo kale dhaawac jirka. Sidaas darteed rabshadaha Masiixiyiin sidoo kale eryay dalkoodii ka, Kuna badiyay nolol.
Masiixiyiinta ah ee waqooyiga Nigeria, gaar ahaan dalalka Shareecada, arkaa muwaadiniin heerka dabaqada labaad, jeeda takoorka iyo ka saarida bulshada.
Christians ka soo jeeda Muslim ayaa sidoo kale soo food saartay diidmada ka timid qoyska u gaar ah iyo cadaadis in ay ka baxaan diinta kiristaanka.
Tusaalooyinka cadaadis Muslim Masiixiyiinta
In weerar lagu qaaday tuulo Christian bishii Febraayo 2018 lagu dilay 106 oo qof. Boko Haram ahaa ka danbeeya weerarka, kaas oo si gaar ah si toos ah dadka ku sugan tuulada.
Laba wadaaddadii iyo Todoba iyo dadka cibaadaysanaya ayaa dhintay kadib markii kaniisad Catholic lagu weeraray by fulaniherdar inta lagu jiro adeeg cibaadada subax bishii April 2018 ka dib weerarkii siiyey gaari bulshada iyo barbareeyay 60 dhismayaasha dhulka ku kadib markii ay bililiqeysteen iyaga.
In June 2018 lagu dilay 120 Nasaarada ee fulaniherdar. Dhibanayaasha ayaa ku socdeen jidka gurigooda ka aas markii ay soo weerareen. kaniisadaha, maalintii cibaadada cabsi weerarro dheeraad ah lahayn.
Maalinta Christmas 2019 lagu dilay kow iyo Nasaara by wiilo iyo toogasho.
Albaabada Open .